Kenya oo dib u fasaxday duulimaadyada Soomaaliya | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Kenya oo dib u fasaxday duulimaadyada Soomaaliya
Kenya (Halqaran.com) – Wasaaradda Arrimaha Dibedda Kenya ayaa sheegtay inay dib u furtay duulimaadyadii dalkaas uga iman jiray Soomaaliya iyo kuwii tegi jiray.
War-saxaafadeed kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibedda Kenya ayaa lagu sheegay inay go’aanka ay qaadatay, ayada oo la eegayo dhex-dhexaadin la sameeyey.
Dowladda Kenya ayaan shaacin cidda sameysay dhex-dhexaadinta.
“Tallaabadan niyad-wanaagga ah waxaa la qaatay ayada oo la eegayo danta labada dal iyo in la rajeynayo inay horseedi doonto in si buuxda loo soo celiyo xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya oo ay ku jirto diblomaasiyadda, ganacsiga iyo xiriirka shacabka labada dal,” ayaa lagu yiri qoraalka Kenya.
Kenya ayaa sheegtay in shuruurdda kaliya ee laga doonayo dhammaan dadka ka imaanaya Soomaaliya ee galaya Kenya ay tahay inay sitaan shahaadada tijaabada COVID-19 ee muujineysa inaysan cudurka qabin, marka laga reebo ilmaha da’doodu ka yar tahay shan jirka.